Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze anaghị arụ ọrụ | Martech Zone
N'afọ gara aga, edere m akwụkwọ na nzaghachi Jonathan Salem Baskin, na-ewepu echiche ya na Social Media nwere ike ịbụ dị ize ndụ maka ụlọ ọrụ. (Ekwenyere m ya na ya otutu).
Oge a - na uche m - Maazị Baskin kpọgidere ya. Companylọ ọrụ ọ bụla anọwo na-awụli elu na mgbasa ozi mgbasa ozi, ịbawanye ahịa na-emefu n'ọgbọ egwuregwu ahụ, mana ole na ole na-ahụ nloghachi ha tụrụ anya ya.
Burger King ejirila ụfọdụ CMOs chụọ n'ọrụ ma chụpụ gị n'ụlọnga Crispin Porter & Bogusky mgbe ha mepụsịrị mkpọsa Facebook na vidio vidio nke na-elebara anya nke ukwuu ebe azụmahịa ahụ gbara akaebe ụzọ isii nke ahịa ahịa. site na AdAge
Na nzukọ na ndi otu ndi ozo, agbaliri m ha otutu oge inye m ihe akaebe a na-apụghị ịgbagha agbagha na enwere ike iji nlezianya hazie, gbue ma gbuo ya mgbasa ozi mgbasa ozi. atụ anya ya laghachi na ntinye ego. Isi ihe dị ebe a bụ atụ anya ya… M nwere ike ịtọ na-atụ anya email, ịkwụ ụgwọ kwa click na search engine njikarịcha mkpọsa karịrị oge… ma ọ dịghị mgbe na-elekọta mmadụ. Anyị ekpuchibeghị anwansi algọridim ịbanye n'ime mmadụ psychy ma.
Ọ bụghị na ekweghị m na ọ dị uru na-elekọta mmadụ media… M na-eme. Mana echere m na e nwere isi ihe abụọ dị na ntanetị nke mgbasa ozi mmekọrịta nke ọma:
Companylọ ọrụ ahụ chọrọ ịkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga -rịrị na-elekọta mmadụ! Kpọ onye ọ bụla mkparịta ụka wee ghara ịzaghachi, zoo, ma ọ bụ ịnwa ịgbanye azịza ya nwere ike imebi ihe karịa mma. Ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile, nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga nke ọma nke ndị ọkachamara na-ede banyere nke ndị ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ… tupu ndị na-ajụ ase ebidoro.
Companylọ ọrụ ahụ chọrọ ịkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-enwerịrị usoro ịzụ ahịa dị n'ịntanetị dị irè adịlarị. Nke ahụ bụ, ha kwesịrị ịnwe nnukwu saịtị, blọọgụ siri ike, ihu ala na-agbanwe elu dị elu, ikike nnabata ọchụchọ na usoro ịzụlite ozi ịntanetị dị irè.
Ọ bụrụ na ị na-agbalị leverage na-elekọta mmadụ media Dịka ọmụmaatụ, tupu imalite iji mmekọrịta gị nke ọma, dịka ọmụmaatụ, mmemme mmechi iji mechie na ị meworị mmekọrịta na ndị debanyere aha gị… ị bụ mkpụrụ. Ọ dị mfe karịa ịmechi azụmahịa nke mmekọrịta siri ike karịa ịtụfu ụfọdụ ngwa ahịa dị oke ọnụ na Facebook ma tụọ anya nzaghachi ka mma na ịlaghachi na ntinye ego! (Okuko ọkụkọ enyeghị aka na-ere bogers.)
Ekwenyere m nke ahụ elekọta mmadụ media bụ ihe ampilifaya. Mgbe ịchọrọ ịkọwapụta ozi - ị ga-ebu ụzọ nwee ozi dị mkpa, ndị na-ege ntị iji kesaa ya, yana ebe ndị na-ege ntị ga-abịa. Nweta aha ahia gi nile, ahia inbound, njikarịcha ihe nchọta, na ịde blọgụ ụlọ ọrụ n'otu ebe tupu ịmalite ịtụba ego na mmemme mgbasa ozi agbasawanye!
Ekwetaghị m na mgbasa ozi mmekọrịta nwụrụ anwụ dị ka a ahịa atụmatụ… M na-eche na ọ bụ mgbe niile na-eduhie dị ka a center nke a atụmatụ mgbe ọ na-ekwesịghị.
Tags: jonathan salem baskinelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketing
Douglas, enweghị m ike ikwenye karịa na nyocha miri emi gị. "Ozi bụ (ka) ozi" n'agbanyeghị na-ajụ, nri?
Odi ntakiri, Jonathan… eche m na onye obula choro ime ka ha na ya dinaa ma choro ka emehe onye ahu ka o zie onye ahu ozi. Ọmụmaatụ, a search maka 'Buy remanufactured iPad' kwesịrị adaa ebe onye ahụ nwere ike ozugbo zụọ… ma ozi maka a Facebook Ad nwere ike ịbụ 'iPads remanufactured with guarantee'. Ebumnuche nke ọchụchọ ahụ bụ ịzụta, ebumnuche nke Mgbasa ozi bụ iji dozie ụfọdụ nlebara anya na-atụghị anya ya.
Akwa isiokwu! Anọ m na-eche onye nwere ebe ị na-emegbu mmadụ ka ọ bido ịmụrụ ndị egwuregwu niile nọ ebe ahụ na-ere 'njikọ aka'. 🙂 O yiri ka enweghị ọrụ dị elu, anyị juputara na ndị na-ahụ maka ịre ahịa. Ma mgbe ha dara dị ka ndị na-ahụ maka ịre ahịa, anyị enyela ihe ọhụrụ a akpọrọ 'onye ndụmọdụ mgbasa ozi mmekọrịta'.
Anọ m na-achọ okwu ahụ l ampilifaya. Na ntu ya. Ego mmekorita nke ndi mmadu ekwesighi ka ha gabiga ma ha kwesiri inwe ebumnuche ndi bara uru, mana nghazi nke ROI bu ihe omuma. Echeghị m banyere mgbasa ozi mmekọrịta dịka ebe ire ere na ụlọ ọrụ na-akpasu iwe na-anwa ịchọta obere nloghachi na obere njikọ aka. Companies na-aga n'ime ha ohere maara ha ahịa na-ekwu okwu banyere ahịa ha mbipụta na inweta "echiche na-edu ndú" wdg… ịzụlite bara uru ika mmata na mgbe ụfọdụ nwere ike leveraged maka ahịa ma ihe karịrị yiri ka na-emetụta ha na mkpebi oge.
Otu ihe atụ ga-abụ ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụrụ na ị na-eso akpụkpọ ụkwụ Toms na Twitter yana kwa akpụkpọ ụkwụ Nike ị nwere ike ịhụ Nike biputere banyere akpụkpọ ụkwụ nlọghachi nke Air Jordan maka naanị $ 100 otu ụzọ ma ị nwekwara ike ịhụ Toms Shoes biputere banyere ọdịiche nke otu akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịme na ndụ ụmụaka na otu ha si arụ ọrụ na ebumnuche nke itinye akpụkpọ ụkwụ na ụkwụ ọ bụla na mbara ala. Mgbe ị gara ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ wee hụ Toms Shoes na-esote nlọghachi nke Air Jordan nke mkparịta ụka yikarịrị ka ọ ga-abata n'uche? Ego m dị na mkparịta ụka achọghị ọdịmma onwe onye naanị banyere otu ị ga - esi nyere aka zute ụfọdụ mkpa ndị dị mkpa ga - eme ka ị nwee mmetụta na - adịgide adịgide karịa mkparịta ụka banyere $ 100 na - eme gị ka ị dị afọ iri na ụma ọzọ.
Naanị 2 ¢ m
Onye na-egbu egbu
Douglas kwuputara nke ọma, yana aka nri maka ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Mpempe gị na-egosipụta mkpa dị mkpa maka ijikọta nke ọrụ ịre ahịa nke ụlọ ọrụ gafee ọtụtụ ihu. Maka ịntanetị karịsịa, enwere m mmasị na sistemụ azụmaahịa nwere ike akpaghị aka dịka Hubspot na-enye, ka ha na-emetụ isi ihe niile ị kwuru.
Ọ dịkwa mkpa itinye ndị na-ege ntị ntị na ọkwa nke onwe, nke nwere ike isiri ụlọ ọrụ buru ibu ike ime. Kedu otu esi eme mmekọrịta gị na ọtụtụ nde ndị ahịa? Kedu ka ị ga - esi tinye ha na ngwaahịa gị karịa ndị na - asọmpi gị, ma ọ bụrụ naanị ihe ga - eme ka ị ghara ịdị iche na ibe gị bụ ọnụahịa? Alitydị mmadụ, na mmekọrịta. Nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ "oge gara aga" ma ọ bụ "n'elu" mgbasa ozi mmekọrịta ma e wezụga iji netwọkụ mmekọrịta ha maka ntuli aka, na ịhapụ azụmahịa ego pụrụ iche. Naanị nke m .02
Ezigbo Mr. Karr,
Nke a na-ekwu site n'aka onye merela ọtụtụ atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya? Ana m atụgharị uche. Agaghị m aja gị maka ịwụda na mgbochi mgbasa ozi mgbasa ozi. Ndị otu gị niile nwere ike ịchọta ihe ọ bụla pụtara na nke a na ha ga-eme mana echere m na ị na-eme ihe ndị mmadụ niile na-eme ma na-ahụ ihe ịchọrọ ịhụ. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi ọha na eze na-eme ihe ọjọọ: http://bit.ly/bad-press - nke ahụ bụ naanị ọrụ nke ngwa ọrụ na-eme ka ị bụrụ onye eziokwu.
Eeh, ijide n'aka na soshal midia bụ ngwa dị ike karia ịlaghachi azụ. Ee ee, ị debela isi ihe nchebe onwe gị ka ị ghara itinye aka na isi ihe gị. Mana nkwupụta blanket a bụ ihe ọzọ karịa ọkụ egwu.
Ndị na-enyere ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa ọdịnala aka ka na-agbanwe agbanwe. Ha ghọtara PUSH, BIG, UGBU A, SLỌ, EGO, DAND DAN! Ma ọ bụghị nanị “ekere òkè na mkparịta ụka” ọ bụ nghọta obodo, ikere òkè na eke ika ika inwego site anọgidesi nke izi ozi.
Ekwenyere m na enweela ọdịda. Mana n'ezie ugbua, etinyere ma ọ bụ karịa gafere n'ofe ọdịnala. Oh na BTW, ọ bụ “Subservient Chicken” not dueling ọkụkọ ma ọ bụrụ na ị ka na-ekwu okwu banyere ya - karịa ka ọ na-arụ ọrụ.
N'ụzọ nkwanye ùgwù,
Hi ikpe ziri ezi,
Ugbu a, ndị ahịa anyị niile nwere mmekọrịta mmekọrịta dịka akụkụ nke atụmatụ ha niile. Nakwa, ọ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị m. Anaghị m 'awụli elu na otu bandwagon'. Ndị ahịa nwere ọgụgụ isi nwere nsonaazụ maka ndị ahịa ha 'anaghị awụlikwa elu'. Anyị na-achọpụta otu esi ejikwa onye na-ajụ ihe ọfụma karịa ịhapụ ọrụ ọrụ n'ihi na Wired ma ọ bụ Inc na-arụtụ aka na 'ihe ọzọ dị mkpa'.
Na Chicken nọ n'okpuru bụ ezigbo nsogbu - ezigbo ihe atụ nke ahịa adịghị mma. Ractdọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-ege ntị na-adịghị mkpa abụghị B what ihe onye na-ere ahịa kwesịrị ịbụ.
Nke a bụ nzaghachi bara uru, mana ọ naghị atụgharị uche na akwụkwọ izizi gị. M kwenyekwara na nyocha gị na anyị na-eme ka ndị na-ajụ ase. Kenneth Cole, Groupon, Red Cross, Ford na akara ọganiihu ọ bụla nke gbasoro na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-eji obi ike chee nsogbu ihu ọsọ karịa ka ọ dị na RT. Ma ị bụ eziokwu na e nweghị “anwansi algọridim” ma ọ bụ a ga-enwe ụzọ isi kpebie ihe ọ bụla nyere ngosi si mmeghachi omume a integrated mkpọsa na-atụ anya ebipụ ha na-adịghị mma ngafe (dị ka ọ bụ) na-elekọta mmadụ media.
Yabụ 'gịnị kpatara azụmaahịa mmadụ ji ada'?
Nde mmadu 15 kụrụ ụbọchị ise mbụ
7,000,000 mgbasa ozi echiche
Nde 450 nde
Nwoke m choro na m nwere ike imetu ihe dika nke ahu. Playa ga-akpọ asị!
Ọ bụrụ na mmata nwere ike ịkwụ ụgwọ gị, echere m na nke ahụ dị mma! Maka Burger King, nke ahụ abụghị okwu - ọ bụ ya mere agbaghaara mkpọsa ahụ na ụlọ ọrụ ahụ gbapụrụ.
Ọ bụrụ na ahịa mmadụ na-emechu gị ihu ma ọ bụ na ọ naghị enyere gị aka, mgbe ahụ ọ dịkarịa ala chọọ ihe ga-eji dochie mgbasa ozi mmekọrịta. Chọọ maka akpaghị aka sistemụ nke nwere ike inyere gị aka na usoro azụmaahịa gị, Dịka m hụrụ na Advancedwebads. ọrụ na-enye na-akparaghị ókè ọkọlọtọ echiche na clicks.